Umgca 52 - iGeofumadas
Meyi, 2011 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Bayiyi-4 yentsasa yasekuseni, emva kwengxoxo edeleyo eyayibonakala ingapheli. Veintipico Kwiminyaka kamva, -ukuba imfuneko yomntu okanye-, ukudibanisa kunye nomlingo ngezonxibelelwano ezininzi zeentlalo zedemoni zenze ummangaliso uphumelele phantse ngaphandle Encyclopedia Tlnn.
Intetho iqalile njengenoma yimuphi umxholo omdala kwi-10 yobusuku:
-Ndikuthanda ukukufumana, kungekude emva ... blah, blah, blah
- ... Ewe, andimbonanga. Ewe, ndicinga ukuba uhlala eUnited States ...
- ... uyazi ukuba ngubani owafa, lowo wathi intlonelo yomsindo ... hahaha, blah, blah, blah.
-Ewe. Hayi, Gay? ... andiyikholelwa!, Yintoni inkunkuma ...
Imigca engama-23 yayanele ukuqonda ukuba sikhutshiwe, kwaye sisiphumo seemeko. Emva koko intetho yatshintsha isitanza kodwa hayi ikwayari:
- Uyenza ntoni?
-Iye ndafunda iBaccalaureate, ngoko ndaya ku-blah, blah, blah.
I-47 imigca engenanto, njengengxoxo esiyakuba nayo kunye nomntu owayesebenzisana naye okanye umhlangano oqhelekileyo kwi-moya ukutshintshisa amamayela ngomthi.
Kodwa umgca we52 utshintshile ikhowudi:
-Iziphi zihlandlo ...
Uhambo lwaqala kulolo candelo le-drive yethu enzima, apho ukuxhatshazwa akukwazi ukuthintela, obomvu kunye letrecilla B. Emva koko waxuba phakathi kwenkumbulo kunye nencoko njengemephu yengqondo kwimisonto edityaniswe kancinane, ukusuka kuncumo lwakhe lokuqala kwelo gumbi leMisebenzi eSebenzayo, xa isisele sasisiya kumnwe wam wesalathiso; kwaye ngelixa elona likhulu lidlulile linegazi kwinqwelo yeplanga, wasusa iqhiya emnyama awayeyisebenzisa njengebhedi yentloko kwaye ngephanyazo wasika ukuvuza kwegazi wagubungela umnwe wam.
Olo jongo beluya kuhlala kwimemori yam ngonaphakade, intle, izihlathi zayo ezimhlophe kunye noncumo lwayo oloyikisayo, iinwele zasendle ezigubungele ubuso bayo xa ingekho iqhiya yentloko kwaye iliso lalo lijonge kum phantse ngeliso lasekhohlo. Wayengamkhumbuli nezinye iimpahla ngaphandle kwehempe yakhe emhlophe kunye nesiketi esiblowu, kodwa kwakungekho mfuneko yokukhumbula enye into kuba uthando ngala maxesha lwalusemehlweni-kule mihla yokuqala, kunjalo-.
Loo mini wawunomlingo, ngoxa uSeño Selva wayejonge umnwe wam enkampanini, ikumbulo lwalo lukhangelekile, kwaye indlela yakhe encinci yenziwa ngayo xa wathi:
-Cinezela apha, unamandla.
Ngobo busuku, emva kokuba ndenze umsebenzi wesikolo kwiholo yokufunda, ndangqengqa eqongeni kwaye kwakungekho lula ukubususa ubuso bakhe kwimemori yam. Ndandiye ndiwavale amehlo am ndize ndimbone esilingini esingeyonyani, ndiwavule ndize ndiphele ekubeni yintsimbi edikidiki pixelated; Ndaziva ndikulungele ukucinga ngaye, kwaye ndandisola iphupha elingaqhelekanga apho ndimbonile ukumomotheka kwakhe kumgama, ekushoneni kwelanga RGB #DDA0DD ekugqibeleni kwahlala kwizitama zakhe waza wazifihla emafini amnyama ephosa njenge-sienna egaxiweyo.
Ngosuku olulandelayo yonke into yabonakala ibuyela esiqhelweni. Iklasi yezeNtlalontle ngombuzo wayo ocaphukisayo weyure yokuqala, imithambo ebulalayo elandelayo, ukudinwa kwemibuzo elula, uxinzelelo ngumfundi ophambeneyo owayebonakala ebazi bonke, kunye nomnqweno omkhulu wokuchama obangele ukuhlekwa UProfesa uElida. Emva koko kwenzeka Bocho kunye neklasi yeMathematika, kwaye ke ndifumene isiqwenga samaphepha enezihlalo ezintathu eziphambili, ezixutywe ngaphandle kobabalo oluninzi:
-Ngomso wam isigulane sam, njani umnwe omncinci.
Ndakhangela phezulu, kwaye wandifaka ngomsila welihlo lakhe xa wandinika ukumncoma I-Azimuth ye-32 ° 27 ′ kunye ne-42.77".
Ke ndaye ndayiqonda into ekufanele ukuba yiyo ukuthandana. Ndiphefumle umoya ophefumlileyo, hayi umoya kodwa umxube weemela ezigqobhoza ipharynx yam, ndikrazula iqhina kumbhobho wam womoya kwaye ndibetha imiphunga yam ngesibetho esimangalisayo. Kwakubulala kodwa kwangaxeshanye kumnandi, ndaziva ukuba ukujonga kwakhe kusegazini kwam, kwaye ngaphandle kokujikela phambili ndaphendula iphepha.
-Ingcono, uthanda umntu.
Khange andiphendule, khange aphinde andibone ekuseni. Ndandisoyika ukuba khange ifike kuye, ndaziva ndisisidenge esoyikekayo, kangangokuba ndalibala kwaphela ngento endiyiphendulileyo.
Kodwa uthando ngaloo mihla lunkqonkqoza emnyango kube kanye kuphela; ke njengeRhuluneli yaseLos Angeles, wabuya nayo yonke into kunye neloli ukuyidiliza. Kanye oko kwenzekile emva kwemini, xa wandicela ngokungazenzisiyo ukuba ndiboleke incwadi yam yokubhalela yesiNgesi, wayibuyisela kum ileta ebhalwe ngobugcisa, i-pastry ngaphezulu enepensile, kunye neeleta ezimbini zokuqala ezifakiweyo. ibenzelwe mna. Ndayibeka epokothweni kwaye ndanyamezela ngokungxama ezi yure zintathu zibonakala ngathi zinaphakade, ukubetha kwentliziyo, ubambo olurhawuzayo kunye nomxube wolwakhiwo ndinomnqweno omkhulu wokuchama. Esi yayisisiqalo sokufika nokuhamba koonobumba abancinci apho wachitha khona iyure ebhala umphefumlo wakhe, isiqingatha esenza kwakhona noLarousse ngesandla kunye nemini yonke ukulinda impendulo eyandayo.
Kuyahlekisa, yayiyi-3 kusasa, kwaye intetho yethu yayingumxube wokulala ukhumbula ixesha elidlulileyo kunye nokuvuka uncokola ngokuzonwabisa. Kude kube lelo xesha, asikaze sithethe ngobomi bethu bangoku.
Kodwa loo nto ibibonakala ngathi kukulandelelana kwecala elingenacala lentliziyo. Sihleka ukugqiba kwelokuba andizange ndimcele ukuba abe yintombi yam, kwaye asizange siyeke ukuba njalo. Kwakungekho kuthandana, kwakungekho kulinda, kuvavanywa ukunyaniseka, kwakungekho thethwano ngomqamelo, ukuzila ukutya, ukuthengisa, izivumelwano okanye intonga emva. Asizange siwazi umzuzu wokuba iileta zethu ezincinci zithathe icala kwimicimbi yemihla ngemihla kodwa besisazi ngaphandle kokuvuma ukuba ziqulathe iintsingiselo; ulwimi oluyikhowudi olwahlukileyo, olwazalwa ngomnwe lwaza lwaphela ngokunyibilika kwegwebu emlonyeni wam ...
Uhlobo lokuphepha izinto ezingenakwenzeka zisithintele ekubuzeni izinto esingafuni ukukuva. Khange sibuze inombolo yeselfowuni, kuphela i-imeyile, bekubonakala ngathi yanele kwaye, emva koko, ngeyure yasekuseni xa iikati zingavakali kakuhle eluphahleni kunye neempempe zabalindi ezinzulwini zobusuku, savuma ukudibana ngosuku olulandelayo American Express yaseSan Pedro Sula.
Kwaye ke, ndaqonda ukuba iiyure zazingekho, kwaye ngenye indlela chorromil Kwiminyaka eyadlulayo ndandihlamba kabini, ndahlamba amazinyo am ngaphezulu, ndaphindaphinda, ndambethe i-iodized rinse kwaye ndachitha phantse imizuzu engamashumi amane kunye nejeli phambi kwesipili ukunciphisa ukungwevu kobomi. Imithambo-luvo, ukungonwabi, ukuphelelwa lithemba, kanye ngaloo mihla; Ndandinenjongo yokuthumela umyalezo omnye kodwa ndazisola ngokoyika ukubola kwento okanye imvakalelo yokuba ibanjiwe ngomnye umntu ... omnye umntu ... omnye umntu ...
Ndilele iiyure ezimbalwa, ndilele ubuthongo. Yayingumnqa ongaqhelekanga wokufuna ukubaleka kwaye ukuzola okuveliswe yimbonakalo yale ntombazana enkundleni, incam yolwimi lwayo yayixukuxa imilebe yayo yangaphezulu. Ngamehlo akhe enesiqingatha esivulekileyo, emhle, kodwa eye kumgudu wokugxininisa zonke iincasa zeencasa ukuqonda mousse kwi umami, okanye yintoni eyokuhlala yolu busana olusandulwanga ngasemva emva kwendlu apho ahlala khona ULaura noBaudilio. Kwaye ke ndiza kuvuka kwaye ndikhumbule ngokungathandabuzekiyo amehlo akhe avaliweyo, amashiya akhe atyhafe ngumnqweno xa besinika umyalelo wokugqiba olo kiss lwesithathu, izandla zakhe zicinezela umqolo wam ukuze ungavumeli ukuhamba kunye nokukhawuleza okwenziwe ngumlomo wakhe ophezulu ...
Kwaye ndalapho, ndihleli etafileni ye-Expresso, nekomityi yam yesibili kaMoka xa isithunywa esincinci esasilindeleyo saba.
Ndihlala kwindawo yokupaka, uphi na?
Ndakhangela ngefasitela kwaye enye imoto yeTurquoise yayipakishwa kwindawo yokupaka.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IGeofumadas | Iindwendwe: | Izixeko ezili-100 kumazwe ali-10
Post Next 403 ingxaki Akuvunyelwe ImposisoOkulandelayo »